Lacagta hawlgabka ee guud
Lacagta hawlgabka ee guud waa aasaaska
Lacagta hawlgabka guud waa qaybta dawladeed ee lacagtaada hawlgabka. Waxa kale oo ay tahay qaybta ugu weyn. Lacagta hawlgabka guud waxa daryeela Hey’adda Lacagta Hawlgabka, taas oo sannad kasta warbixinta lacagta hawgabka kuug soo dirta gudaha galka waraaqaha oo midabka liinta oo kale leh.
Sida ugu dhakhsaha badan markad u heshid dakhli ee bilaabanto bixinta canshuurtu ayaad bilaabaysaa kasbashada lacagta hawlgabka ee guud. Tani waad helaysaa xitaa marka aad waxbaranayso, fasax waalid ku jirto ama haysato gunnada bukaanka ama gunnada dadka aan shaqayn. Sannad kastaba waxa shaqo-bixiyahaagu bixiyaa in u dhiganta boqolkiiba 18,5 ka mid ah mushaaradaada oo ku aadan lacagta hawlgabka ee guud, taas oo noqota qaybta ugu weyn ee lacagtaada hawlgabka.
Markay sii badato waxad qaadato iyo markay sii dheeraato mudada aad shaqaysa, waxaa sii sarreynaysa lacagtaada hawlgabka guud.
Lacagtaada hawlgabka guud waxay ka koobnaan kartaa:
lacagta hawlgabka ee dakhliga
lacagta hawlgabka ee faa’iidada laga sameeyo
lacagta hawlgabka ee dammaanadaysan
Sannad kasta boqolkiiba 16 ka mid ah mushaaradaada ayaa loo dhigaa lacagta hawlgabka dakhliga. Lacagta hawlgabka dakhliga waa qaybta ugu weyn ee lacagta hawlgabka guud iyo aasaaska dhammaan nidaamka lacagta hawlgabka. Adigu keli ahaantaa raad mak u yeelan kartid dhigista lacagtaada dakhliga.
Sannad kastaba boqolkiiba 2,5 ka tirsan mushaaradaada ayaa loo dhigaa lacagta hawlgabka ee faa’idada laga sameeyo. Lacagta hawlgabka ee faa’iidada laga sameeyaa waa qayb ka mid ah lacagta guud ee hawlgabka taas oo adigu aad dhigan karto saamiyo, tusaale ahaan saamiyada anshaxaysan ee KPA.
Lacagta hawlgabka ee dammaanadaysan waa aasaaska ilaalinta ee qofkaaaga nolosha gudaheeda soo lahaa dakhli shaqo oo aad u yaraa amaba aan sooba qaadan. Sidaas darteed dhammaan dadku ma helaan lacagta hawlgabka ee dammaanadaysan.